NIHOTSAKA INDRAY NY VATOBE ENY AMBANIN’AMPAMARINANA : Miisa 4 ny maty, 8 naratra mafy, trano miisa 5 potika
Vao tsy nikombona akory ny fery tamin’ ny tranga niseho mahakasika ny fihotsahana vato eny Ambanin’ Ampamarinana ka namoizana aina am-polony tamin’ny volana janoary iny, dia niseho sahady indray ny loza mahatsiravina, omaly alahady tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tany ho any. 3 février 2019
Tamin’ny ora nanoratanay lahatsoratra omaly tolakandro dia fantatra fa trano miisa dimy indray no nilatsahan’ireo vatobe teny amin’io toerana io. Miisa efatra ny maty izay nahitana zazakely iray , renim-pianakaviana iray ary lehilahy anankiroa. Miisa valo kosa no mbola fantatra fa naratra mafy ka nifamonjena haingana, nentina teny amin’ ny hopitalibe HJRA.
Tsy nizaha fotsiny ny loza ny mpitondra fanjakana fa nandray andraikitra avy hatrany nampahery ireo tra-boina sy nitondra fanampiana. Tonga nisolo tena ny fanjakana nanolotra izany teny amin’ny hopitaly HJRA ny minisitra isany : Hajo Andrianainarivelo, Lalatiana Rakotondrazafy, sy ireo mpikambana hafa ao amin’ny governemanta Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra mazava ny tena isan’ireo olona namoy ny ainy sy ny naratra fa mbola manohy ny fikarohana ireo olona niharan-doza ny mpamonjy voina, io omaly io.
Raha tsiahivina kely ny tamin’ny teo aloha dia am-polony ny fitambaran’ny aina nafoy teny amin’ny Fokontany Tsimialonjafy eo ambanin’ Ampamarinana, nosokirana sy natao savahao tamin’ny loza niseho vokatry ny rotsak’orambe ny volana janoary lasa teo iny. Manginy fotsiny ireo loza nitranga tamin’ny taon-dasa nampivarahontsana.
Tokony hafindra toerana ireo olona mipetraka amin’ny faritra tandindomin-doza
Mila mahasahy mandray andraikitra ny mpitondra ny tanàna eto Antananarivo manoloana ny zava-misy satria efa manao ranolava loatra no sady mamono olona hatrany ny fihotsahana.
Tokony ho laharam-pahamehana ny famindrana sy fanakanana ireo olona mipetraka amin’ny faritra avo, indrindra indrindra fa ireo monina amin’ny trano eny Ambanin’Ampamarinana. Ny mahagaga ny rehetra koa anefa dia toa mbola misy manorina trano ihany eny amin’ny manodidina na dia efa misy aza ny loza mampihorin-koditra tahaka izao. Betsaka ireo mponina teto an-drenivohitra no nanambara fa tsy tokony hisy hipetraka intsony eny amin’io faritra io, raha tsy izany dia ho faty olona foana no hiseho eny. Tsy tokony hohadinoina rahateo koa mantsy fa mbola ho lava ny fotoam-pahavaratra ary mbola ahiana ny mety hikisahan’ireo vatobe ireo. Andrasana ny fandraisan’ andraikitra avy amin’ny mpitondra fanjakana aloha hatreto mba hanome vahaolana .